Ny 10 iOS 10 dia mampiseho izay miseho avy amin'ny vondrona jailbreak
Isan-taona, Apple dia manavao ny lozisan'ireo fitaovana iOS miaraka amin'ny dikan-teny maoderina vaovao. Tamin'ity taona ity tao amin'ny WWDC 2016, nanambara ny iOS 10 i Apple, ary tsy ahitana afa-tsy ny karazana singa vaovao ahafahan'ny mpiserasera manararaotra, saingy misy ihany koa izy miaraka amin'ny sasany ...
Ahoana ny fametrahana rhythmbox 3.3.1 amin'ny Ubuntu 16.04
Rhythmbox 3.3.1 ho an'ny Linux Ubuntu. Ahoana ny fametrahana Rhythmbox 3.3.1 amin'ny Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 ary Ubuntu 15.10 Systems. Ny Rhythmbox 3.3.1 dia navotsotra tamin'ny fiovana samihafa. Nalefa tao amin'ny WebKit2 ary nitondra fomba fitantanana tsara kokoa izy.
Ahoana no hanokafana birao TCP / UDP ao anaty shell shash
Eritrereto hoe te hanokatra sokajy TCP / UDP ianao ao amin'ny server Linux amin'ny antony samihafa. Ohatra, te-hanamarina raha misy adiresy / seranana voafaritra tsara. Na te haka tranonkala iray misimisy kokoa ianao na mandefa API mialohan'ny fitsapana. Na tianao ...
Google Updates YouTube ho an'ny iOS mba hanohanana ny fandefasana ny sary
Androany Google dia nandefa vaovao farany momba ny fampiharana Youtube ao amin'ny iOS. Ny fanavaozana dia mitondra ny fampiharana amin'ny version 11.10, ary iray amin'ireo fanavaozana mavesa-danja kokoa ilay fampiharana efa hita hatramin'ny Google no nitondra ny interface teo amin'ny Android version taorian'ny fanavaozana lehibe farany. ...
Mailnag Mail Notifier 1.2 dia nalefa tamin'ny New IMAP Folder Chooser, Mizara Popup Menu Layout Ho an'ny GNOME Shell, More
Integration Mailnag Unity with Messaging Menu Mailnag GNOME Shell extension changes in Mailnag 1.2.0: added support for settings settings in GNOME-Control-Center; Fanatsarana ny kaonty manatsara ny fifantenana ny safidim-baovao vaovao IMAP; libnotify plugin: nampiditra fomba vaovao fampahafantarana "Short Summary" vaovao (fomba vaovao fampandrenesana virtoaly, natolotry ny GNOME 3); ...
Ahoana ny fametrahana ny Moon Moon 26.1.1 (Internet Explorer Internet Explorer) eo amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana Pale Moon 26.1.1 amin'ny Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary Ubuntu 14.10 Systems. Ny Pale Moon, tranokala Firefox mifototra amin'ny Internet dia lazaina fa hatramin'ny 25% haingana kokoa ny voalohany. Ny navigateur Palemoon dia manohana ny fanitarana ofisialy Firefox, saingy tsy manohana ny rehetra.
Atsaharo Git 2.7.4 Amin'ny Ubuntu, amin'ny PPA
Atsaharo ny Git 2.7.4 amin'ny Ubuntu, amin'ny PPA. Install Git 2.7.4 amin'ny Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary Ubuntu 14.10 Systems. Git dia rafitra fanamafisana ny famolavolana nataon'i Linus Torvalds. Mila rindrambaiko toy izany izy amin'ny fizarana ny code sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny hafa.
Mihoatra ny Windows: Ahoana no ataon'i Android N ny orinasa
Ny iPhone sy ny iPad an'i Apple dia efa ela no nanapaka ny orinasa, miaraka amin'ny tsena ambony amin'ny isam-pikarohana rehetra. Ny fitaovana iOS an'ny Apple dia fitaovana voalohany post-BlackBerry haka ny fiarovana sy ny fitantanana tambajotra sosialy, ary i Google dia niadana hanaraka ny tarika Android. Saingy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Android dia manana ...
CloudHole: Ataovy ny CloudFlare fa tsy robot captchas miseho matetika
Ny iray amin'ireo fahasamihafana amin'ny fifandraisana amin'ny VPN na Tor dia mampahatahotra ny "SMS tsy robot" izay azonao amin'ny tranonkalanao mitsidika izay mampiasa CloudFlare. Misy takelaka fanelanelanana iray mampiseho anao fa misy "dingana iray hafa" ...
Ahoana ny famahana ny CURL amin'ny CPANel amin'ny CentOS 7
CURL dia môtera tsotra izay ahafahanao mifandray sy mifandray amin'ny karazana servetera isan-karazany mampiasa karazana protocoles. Ny curl dia manohana indrindra http, https, ftp, gopher, telnet, dict, rakitra ary ldap protocols. Manohana ny SMB, SMBS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, ...
Ny famoahana Microsoft Windows 10 SDK Preview Build 14267
Fotoana feno alahelo tamin'ny fandaharana Windows 10 Insider izany. Miaraka amin'ny Windows 10 Mobile Insider Build 14267, ary Windows 10 manangana 14721, dia vao avy namoaka vaovao vaovao an'ny Windows 10 SDK i Microsoft. Ny Preview Build 14267 SDK dia ...
Ny Windows Store analytics API dia manome devs ny fidirana haingana amin'ny stats app
Nanambara i Microsoft androany fa ny mpandrindra apps Windows Store dia afaka mamaky mora kokoa ny doka mifandraika amin'ny app amin'ny alàlan'ny API vaovao. Ny mpamorona dia afaka misintona ny angon-drakitra isan'andro, isan-kerinandro, na isam-bolana ary manangana ny API mba hialana amin'ny fampiharana fotsiny ny fampiharana mandritra ny daty.
Ny 'Amazon' 'Tap' ary ny 'Echo Dot' gadgets dia mamela ny Alexa eto amin'izao tontolo izao
Raha te-hijery hoe ahoana ny fomba hiainana ao amin'ny Amazon amin'ny sary ho avy, mandehana ao amin'ny UX Lab ao San Francisco. Tsy izay azonao atao; Mahatsiaro tena ho toy ny filoha miasa ao anatiny ny fiarovana. Saingy rehefa tonga any ambadiky ny varavarana, ny toerana ...
Ny Add-ons amin'ny Google Analytics ho an'ny taratasy: Intro amin'ny fitaovana tsy ampiasaina
Navoakan'i tian_wang Ny lahatsoratra amin'ny bilaogy androany dia mizara ny zava-drehetra tokony ho fantatra momba ny fitaovana tsy misy fankasitrahana: ny fanampiana Google Analytics ho an'ny Google Sheets. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihiko amin'ireto manaraka ireto: 1. Inona no atao hoe add-on amin'ny Google Analytics? 2. Ahoana ny fametrahana sy fametrahana ...
Mitantana ny serivisy ao amin'ny Firefox sy Chrome
Chrome sy Firefox dia manome ny mpampiasa manana safidy hikarakara ireo mpiasan'ny serivisy miasa ao amin'ny tranokala, anisan'izany ireo safidy hanesorana ireo mpiasa mpiasa amin'ny tranonkala. Mpikarakara ny serivisy dia endrika miavaka sy manohana amin'ny ankamaroan'ny navigateur maoderina izay mamela ireo tranonkala sy serivisy hifanerasera amin'ny ...
1 2 3 4 ... 9 Manaraka
Users PDG command line app store OS X Unix fifamoivoizana Fitaovana finday MySQL File Debian fanamarinana nbsp SSD fitaovana 'App GNOME 04 bilaogy Up " Windows 8 API Bing finday avo lenta Performance Chrome Support Plugin endri-javatra afa-po Malagasy Bible toe-tsaina WordPress tahirin-kevitra Time windows update "PC rindrambaiko haino aman-jery sosialy Firefox Twitter Toetoetra Apache iPhone HTTP Microsoft Apps Plugins Ubuntu 14.10 fitaovana Apple Watch paoma Ubuntu SSH Video Windows 10 fitaovana finday HTTPS SEO Linux ubuntu 15.04 fitaovana famotsorana famerenana 10 hametraka CentOS 7 PPA lalao Windows USB Database Google Samsung loharano misokatra Nginx Android Server One ' Linux Mint Command takelaka fikirakirana ram HTML MAMAKA PHP Rafitra fikirakirana Ubuntu 16 Ubuntu 14.04 rafitra Cortana Unité centrale Windows Phone Company bilaogy fikarohana Facebook Screen CentOS Samsung Galaxy Linux Ubuntu Systems Microsoft Windows vaovao farany IP adiresy YouTube web browser web server lalao Phone raki-daza taona